waxaa maamula 20-04-29
Habka waxsoosaarka ee dhalada galaaska badanaa waxaa ka mid ah: material Qalabka horay loo diyaariyey. Burush waxyaabaha ceyriin ee bulukeetiga ah (ciid bacaadka ah, ashkudka soodhada, dhagaxa nuuradda, feldspar, iwm.) Si aad u qallajiso walxaha ceeriin ee qoyan, oo meesha ka saar alaabada ay ka kooban tahay birta si aad u hubiso tayada muraayadda. ② Diyaarinta ...
Wuxuu xirayaa kaydinta muddada-dheer ama dhalada dhalada ayaa aad ugu habboon
by admin taariikhdu markay ahayd 19-12-11
Dhalooyinka dhalada ah, ee dadka badankood aragtidooda waxaa badanaa ku jira dhalada fudud ee tuulada. Waqtiyadii hore, dhoobo carrada sida dhalooyinka qajaarka ee la jeexjeexay, ayaa muhiim u ah qoys kasta. Waqtigan xaadirka ah, oo leh xawaareynta nolosha, pickles waxay bilaabeen inay galaan supermarket-ka, si ay u galaan ...
by admin 19-12-10
Xuzhou Chuancheng Glassware Co., LTD. waa shirkad wax soo saar oo ku takhasustay farsamada wax soo saarka dhalada dhalada, tikniyoolajiyada goynta, alaabada dhalada badan leh. Shirkadda leh biyo ku habboon, gaadiid dhulka iyo hawada ah, waxay u dhowdahay dekedda Lianyungang. Waxaan haysannaa 5 otomatik p ...
Wax soo saarkii ugu weynaa
waxaa maamulay 19-12-09
Warshaddeenna waxay soo saartaa wax kabadan 800 nooc oo waaweyn: dhalada malabka, malaaska dhalada, dhalada qaado, dhalada soy, dhalada saliidda, dhalada saliidda, dhalada khamriga, dhalada cabitaanka, dhalada qasacadaysan, dhalada galaaska, xawaashka dhalo, dhalo khamri miro, bot khamri caafimaad ...